Xildhibaanada Baarlamaanka Hirshabeelle oo ansixiyay Golaha Wasiirada – STAR FM SOMALIA
Xildhibaanada Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa goor dhow ansixiyay Golaha Wasiirada cusub ee uu bishii hore soo magacaabay Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare, kaddib kulan aan caadi aheyn oo ay saaka ku yeesheen magaalada Jowhar.
Kulanka oo ay soo xaadireen 79 Mudane ayaa waxaa ogolaatay 77 Xildhibaan, halka labo Xildhibaan ay diiday, cid ka aamustay ka jirto.
Guddoonka Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa ku dhawaaqay in Golaha Wasiirada ay yihiin ansax, waxaa la filayaa in goor dhow la dhaariyo Wasiirada.
Maalintii shalay ayay aheyd markii kulan ay yeelan lahaayeen Xildhibaanada uu kooram la’aan u baaqday, kaddib markii ay Xildhibaanada cabasho ka keeneen mushaar la’aan heysay muddo bilooyin ah.
Golaha Wasiirada uu soo magacaabay Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa caqabado la kulmayay tan iyo markii uu soo dhisay, maadaama Golihiisa Wasiirada aanay ku jirin Xildhibaano, waxaana wada hadalo muddo qaatay lagu guuleystay in lagu qanciyo Xildhibaanada ka soo horjeeday magacaabista oo ugu dambeyn ay maanta ansixiyeen